वाम गठबन्धन बहुमततर्फ | Mechikali Daily
वाम गठबन्धन बहुमततर्फ
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: २४ मंसिर २०७४, आईतवार ०७:०८
बुटवल, । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको मंसिर १० र २१ गते भएको निर्वाचनको शनिबार रातिसम्म सार्वजनिक मत परिणाममा वाम गठबन्धनले अग्रता कायम गरेको छ । मतगणना सुरु भएदेखि नै वाम गठबन्धनको अग्रता निरन्तर कायम भएको हो ।
हामीले यो समाचार तयार पार्दासम्मको प्राप्त विवरणअनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ नेकपा (एमाल) ले २८ , नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नौ र नेपाली कांग्रेसले ६ स्थानमा जित हासिल गरेका छन् । हुम्लाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार छक्कबहादुर लामा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका छन् ।
आयोगका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यतर्फ एमालेका ३०, माओवादी केन्द्रका २२, कांग्रेसका ८, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई, नयाँ शक्ति पार्टीको एक तथा एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन् । यस पटकको चुनावमा केही चर्चित नेताहरुले पराजय भोग्नु परेको छ भने केही नयाँ अनुहार उदाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका तर्फबाट मनाङमा पाल्तेन गुरुङ, मुस्ताङमा प्रेमप्रसाद तुलाचन, बझाङमा भैरवबहादुर सिंह, म्याग्दीमा भुपेन्द्र थापा, मुगुमा गोपालबहादुर बम, डोल्पामा धनबहादुर बुढा, बाजुरामा लालबहादुर थापा र दार्चुलामा गणेश सिंह ठगुन्ना विजयी भएका छन् । यस्तै ताप्लेजुङमा योगेश भट्टराई, काठमाडौं–३ मा कृष्ण राई, मोरङ–३ भानुभक्त ढकाल, मोरङ– ६ मा लालबाबु पण्डित र मोरङ–१ मा घनश्याम खतिवडा विजयी भएका छन् ।
यसैगरी सिन्धुपाल्चोक– २ मा शेरबहादुर तामाङ, बाग्लुङ–१ डा.सूर्य पाठक, ओखलढुंगामा यज्ञराज सुनुवार, धादिङ– १ मा भूमि त्रिपाठी, धादिङ–२ मा खेम लोहनी, ललितपुर–२ कृष्णलाल महर्जन र काठमाडौं– ८ मा जीवनराम श्रेष्ठ पनि विजयी भैसकेका छन् । काठमाडौं–९ मा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, पाँचथरमा वसन्तकुमार नेम्वाङ, दोलखामा पार्वत गुरुङ र बैतडीमा दामोदर भण्डारी निर्वाचित भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रुकुम पूर्वमा कमला रोका, रुकुम पश्चिममा जनार्दन शर्मा, बाग्लुङ–२ मा देवेन्द्र पौडेल, सिन्धुपाल्चोक– १ मा अग्नी सापकोटा, ललितपुर–३ मा पम्फा भुसाल, जुम्लामा गजेन्द्र महत, सोलुखुम्बुमा हेमकुमार राई मोरङ–४ मा अमनलाल मोदी र जाजरकोटमा शक्ति बस्नेत विजयी भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले काठमाडौं–१ मा प्रकाशमान सिंह, काठमाडौं–४ मा गगन थापा, रसुवामा मोहन आचार्य, काठमाडौं–१० मा राजन केसी र मोरङ– २ मा मिनेन्द्र रिजाल विजयी भएका छन् । यस्तै हुम्लामा स्वतन्त्र उम्मेदवार छक्कबहादुर लामा विजयी भएका छन् ।
नेता नेपाल विजयी
एमाले नेता माधवकुमार नेपाल काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसका दीपक कुइँकेललाई झण्डै दोब्बर मतले हराउँदै नेपाल निर्वाचित भएका हुन् । नेपालले २७ हजार ३ सय ६६ मत पाए भने कुइँकेलले १४ हजार ९ सय मत पाए ।
साझा विवेकशील पार्टीका सूर्यराज आचार्यले ७ हजार ४ सय ३७ मत पाए । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचित नेपालले उपनिर्वाचनमा सो क्षेत्र छाडेपछि कुइँकेल निर्वाचित भएका थिए ।
सप्तरी २ बाट संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचित भएका छन् । २१ हजार ६ सय २० मतसहित यादव निर्वाचित भएका छन् । माओवादी केन्द्रका उमेशकुमार यादवले ११ हजार ५ सय ८० र स्वतन्त्र उम्मेदवार जयप्रकाश ठाकुरले ९ हजार ४ सय ५८ मत पाए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं गोरखा २ का उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठले चुनावी प्रतिस्पर्धी डा. बाबुराम भट्टराईलाई जितका लागि बधाई दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘गोरखा २ का आदरणाीय मतदाताको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्दै विजयका निम्ति डा. बाबुराम भट्टराईलाई बधाई ।’ उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम जे जस्तो भएपछि देश जनता, सत्य र न्याय प्राप्तिका निष्ठामा अविचलित रहने वाचा गरेका छन् । कांग्रेसको समर्थन प्राप्त भट्टराईले श्रेष्ठलाई भारी अन्तरले पराजित गरेका हुन् ।
प्रदेश–५ का भावी मुख्यमन्त्री पोखरेल विजयी
प्रदेशसभातर्फ दाङ क्षेत्र नं २ कमा वाम गठबन्धनतर्फका शंकर पोखरेल २० हजार ७२३ मत ल्याई विजयी भएका छन् । एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य पोखरेलका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका कमलकिशोर घिमिरेले ११ हजार १७२ मत ल्याएका छन् । कुल मतदाता ५१ हजार ७०० रहेकामा प्रदेशसभा २ (क)मा ३५ हजार ५४२ मत खसेको थियो ।
भीमसेनदास प्रधानसँग झक्कु सुवेदी पराजित
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ का प्रतिनिधिसभा सदस्यमा कांग्रेस उम्मेदवार भीमसेनदास प्रधान विजयी भएका छन् । उनले वाम गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी उम्मेदवार झक्कु सुवेदीलाई पराजित गरे । विजयी भएका प्रधानले १६ हजार ७८५ मत पाए । सुवेदीले १५ हजार ४८५ मत पाएका छन् । सुरुमा वाम उम्मेदवार सुवेदीले अग्रता लिए पनि पछिल्ला गणनाबाट प्रधान विजयी भएका हुन् ।
कालीकोटमा वाम गठबन्धनको ‘क्लिन स्वीप’
प्रदेश ६ मा पनि वाम गठबन्धनले ‘क्लिन स्वीप’ गरेको छ । कालीकोटको एउटा प्रतिनिधिसभा सदस्य र दुईवटा प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनकै उम्मेदवारहरु विजयी भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभातर्फ वामपन्थी गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका दुर्गबहादुर रावत विजयी भएका छन् । रावतले २१ हजार ११२ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका भुपेन्द्रजंग शाहीले १६ हजार ४०७ मत प्राप्त गरेका छन् ।
यस्तै प्रदेश (क) मा एमालेका कुर्मराज शाही विजयी भएका छन् । शाहीले ११ हजार ९३५ मत ल्याए भने प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका टेकराज शाहीले ४ हजार ४८९ मत ल्याए । यस्तै प्रदेश (ख)मा विनाविभागीय मन्त्री माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही विजयी भएका छन् । मन्त्री शाहीले १२ हजार १५३ मत ल्याए भने उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका कालीबहादुर सहकारीले ९ हजार ३४२ मत ल्याएका छन् । यो प्रदेशको मुगु, डोल्पा, रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा क्लिन स्वीप गरिसकेको छ ।